Play 9 776
Beautiful isifaniselo nge repaints ezimbili ngokwezifiso umsindo, high quality imodeli ukulanda manje!
Vickers VC10 iyona airliner imiphumela yesikhathi eside ezayo British elaklanywa futhi lakhiwa Vickers-Armstrong (Aircraft) Ltd, indiza yayo Baqale Brooklands e Surrey 1962. Indiza lwenzelwe bahlinza imizila eside amabanga ngesivinini Subsonic kanye nokuthola imisebenzi inselele futhi ephakeme kusuka zezindiza Afrika. Umqondo sokuqala VC10 kwaba ukunikeza endizeni inikwa amandla yi-a ophendulayo ezingase kahle ujabulele zezindiza emifushane ngokuvamile lisetshenziswa ngesikhathi. Ukusebenza kwe-VC10 kwakusobala kangangokuthi Wafinyelela owela esheshayo ye-Atlantic (eLondon naseNew York), irekhodi namanje aphethwe kuze kube manje ukuba izindiza Subsonic, kuphela Concorde leSupersonic iyashesha.
I VC10 ngokuvamile kuqhathaniswa Ilyushin Il-62 (USSR), i-izindiza ezimbili kukhona ezine-injini ukucushwa kuphela emuva. Ngo-July 2012, 8 VC10 sihlale enkonzweni njengoba zasemoyeni refueling izindiza nge-Royal Air Force, umhlalaphansi kuhlelwe ngoMashi 2013